HTML वा पाठ कागजातमा स्क्रिप्ट हालको कर्सर स्थानमा घुसाउनुहोस्.
यदि तपाईँंको कागजातमा एउटा स्क्रिप्ट सम्मिलित भएमा,स्क्रिप्ट बाट स्क्रिप्टमा फड्कनका लागि सक्रिप्ट सम्पादन गर्नुहोस् संवादमा अघिल्लो र पछिल्लो बटनहरू सम्मिलित हुन्छन।
/* सबै पाठ यहाँ उपेक्षा गर्नुहोस् */
तपाईँंले लिङ्क गर्न चाहनु भएको स्क्रिप्ट फाइल अवस्थित गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् घुसाउनुहोस्.
तपाईँंले घुसाउन चाहनु भएको स्क्रिप्ट सङ्केत प्रविष्ट गर्नुहोस्.
Title is: स्क्रिप्ट घुसाउनुहोस्